ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ – Page3– Shangyimm
ကိုယျခံစှမျးအားကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ သဘာဝရနှေေးကွမျးတဈခှကျ ပွုလုပျနညျး
Posted on January 26, 2021 January 26, 2021 by Tin Mg Shwe
ကိုယျခံစှမျးအားအတှကျ ဂငျြး၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ လကျဖကျရညျကွမျး ဘယျလိုနှပျသလဲ..?
ကိုယျခံစှမျးအား အထူးသဖွငျ့ အဆုပျအတှကျ ဆေးဘကျဝငျတဲ့ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ဂငျြးတို့ကို ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခနြိုငျသညျ့ နညျးလမျးတဈမြိုး အဖွဈဖွငျ့လညျး သောကျကွတယျ။ ဂငျြးနဲ့ ကွကျသှနျဖွူကို ရနှေေးကွမျးလို့ ပွောကွတဲ့ လကျဘကျရညျကွမျးနဲ့ နှပျလို့ ရတဲ့ ရှေးနညျးဟောငျးတဈခုကို တငျပွလိုပါတယျ။
ဂငျြး၏ ဆေးဘကျဆိုငျရာဂုဏျသတ်တိမြား အာယုဗဒေကမျြးမြားတှငျ အကယျြ ဖျောပွထားပါတယျ။ ယခု အကဉျြးမြှ ရေးပါမယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ အစာမကွခွေငျးကို ပွပြေောကျစတေယျ။ကွကျသှနျဖွူက ရောငျရမျးခွငျးနှငျ့ ဗိုငျးရပျဈနှိမျနငျးခွငျး ဂုဏျသတ်တိမြားကွောငျ့ ကြျောကွားသညျ။ နှဈခုစလုံး အလှနျအစှမျးထကျသော အပငျမြားဖွဈတယျဆိုရာ အငွငျးပှားဖှယျရာ မဟုတျပါ။
အဲဒီနှဈမြိုးကို ဆေးဘကျဝငျတဲ့ လကျဖကျရညျကွမျးနဲ့ နှပျလိုကျလိုကျတဲ့အခါ ရရှိလာတဲ့ ဂငျြးကွကျသှနျဖွူ လကျဖကျရညျအနဖွေငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကစြခွေငျးနှငျ့ ကိုယျခံစှမျးအားကို မွှငျ့တငျရနျ အကောငျးဆုံးအရညျ ဖွဈပါတယျ။ ဆေးဖကျဝငျ အပငျမြားဖွဈကွပွီး အအေးမိပွီးနောကျ မကွာခဏ တရှောငျရှောငျဖွငျ့ အအေးမိခွငျး၊ နှာခေါငျးအတှငျး ပိတျခွငျး၊ လညျခြောငျးနာခွငျးမြားကွောငျ့ ဖွဈပျေါသော အဆငျမပွမှေုမြားကို သကျသာစရေနျ အလှနျထိရောကျပါတယျ။ သငျ နစေ့ဉျဆေးဖကျဝငျ အပငျမြားအရညျကို သောကျနိုငျတယျ။ သို့သျော ရောဂါလက်ခဏာမြား မွဲနလြှေငျ ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျလြှငျ အကောငျးဆုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဂငျြး – ကွကျသှနျဖွူလကျဖကျရညျလုပျနညျး –
၁။ ဂငျြးကို အခှံနှာ၊ ရဖွေငျ့ ဆေးကွော၊ အတုံးသေးသေးမြား လှီး
၂။ ရနှေေးအိုးထဲ ရခှေကျတဈခှကျသာသာ ထညျ့ပါ။ ဂငျြးအတုံးငယျမြားကို ထညျ့ပါ။
၃။ ကွကျသှနျဖွူကို လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးစာ ထညျ့ပါ။ ငရုတျကောငျးစေ့(အမညျး) လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဝကျ ထညျ့ပါ။
၄။ ၅မိနဈခနျ့ ပွုတျထားပါ။
၅။ အပူမှ ဖယျရှားပွီး ခှကျထဲ ဇကာစဈထညျ့။ လကျဖကျခွောကျ ခတျပါ။ အရသာ ပိုကောငျးပွီး ဆေးဘကျပိုဝငျခငျြရငျ လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဝကျ ပြားရညျစဈစဈ ထညျ့မှပေါ။ သငျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကိုယျခံစှမျးအားကောငျးစမေယျ့ ဂငျြး – ကွကျသှနျဖွူ လကျဖကျရညျကွမျး ရပါပွီ။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဘယ်လိုနှပ်သလဲ..?
ကိုယ်ခံစွမ်းအား အထူးသဖြင့် အဆုပ်အတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဂျင်းတို့ကို ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်မျိုး အဖြစ်ဖြင့်လည်း သောက်ကြတယ်။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ရေနွေးကြမ်းလို့ ပြောကြတဲ့ လက်ဘက်ရည်ကြမ်းနဲ့ နှပ်လို့ ရတဲ့ ရှေးနည်းဟောင်းတစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်။
ဂျင်း၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ အာယုဗေဒကျမ်းများတွင် အကျယ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယခု အကျဉ်းမျှ ရေးပါမယ်။ အဓိကအားဖြင့် အစာမကြေခြင်းကို ပြေပျောက်စေတယ်။ကြက်သွန်ဖြူက ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ နှစ်ခုစလုံး အလွန်အစွမ်းထက်သော အပင်များဖြစ်တယ်ဆိုရာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဟုတ်ပါ။
အဲဒီနှစ်မျိုးကို ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ နှပ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါ ရရှိလာတဲ့ ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ လက်ဖက်ရည်အနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးအရည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင် အပင်များဖြစ်ကြပြီး အအေးမိပြီးနောက် မကြာခဏ တရှောင်ရှောင်ဖြင့် အအေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းအတွင်း ပိတ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အဆင်မပြေမှုများကို သက်သာစေရန် အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ သင် နေ့စဉ်ဆေးဖက်ဝင် အပင်များအရည်ကို သောက်နိုင်တယ်။ သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာများ မြဲနေလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂျင်း – ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖက်ရည်လုပ်နည်း –
၁။ ဂျင်းကို အခွံနွှာ၊ ရေဖြင့် ဆေးကြော၊ အတုံးသေးသေးများ လှီး
၂။ ရေနွေးအိုးထဲ ရေခွက်တစ်ခွက်သာသာ ထည့်ပါ။ ဂျင်းအတုံးငယ်များကို ထည့်ပါ။
၃။ ကြက်သွန်ဖြူကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ ထည့်ပါ။ ငရုတ်ကောင်းစေ့(အမည်း) လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက် ထည့်ပါ။
၄။ ၅မိနစ်ခန့် ပြုတ်ထားပါ။
၅။ အပူမှ ဖယ်ရှားပြီး ခွက်ထဲ ဇကာစစ်ထည့်။ လက်ဖက်ခြောက် ခတ်ပါ။ အရသာ ပိုကောင်းပြီး ဆေးဘက်ပိုဝင်ချင်ရင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက် ပျားရည်စစ်စစ် ထည့်မွှေပါ။ သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းစေမယ့် ဂျင်း – ကြက်သွန်ဖြူ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ရပါပြီ။
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ကိုယျခံစှမျးအားကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ သဘာဝရနှေေးကွမျးတဈခှကျ ပွုလုပျနညျး
(၁)သှေးပွနျကွော စှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျးခွငျး
ခွထေောကျရှိ သှေးပွနျကွောတှေ ကောငျးကောငျး အလုပျမလုပျနိုငျပါက သှေးတှေ ကောငျးစှာ စီးဆငျးနိုငျတော့မှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ခွထေောကျနှငျ့ ခွကေငျြးဝတျတှမှော စုပုံနတေတျတာမို့ ခွထေောကျတှေ ဖောရောငျနစေပေါတယျ။
သှေးပွနျကွောမြား ပိတျဆို့နခွေငျးဟာ သှေးတှကေို ပုံမှနျစီးဆငျးနကေအြတိုငျး ကောငျးစှာမစီးဆငျးစပေဲ စုပုံနစေတေဲ့အတှကျသှေးကွောအတှငျး ဖိအားတှေ ဖွဈပျေါပွီး သှေးကွောပတျလညျရှိ တဈရှူးတှဆေီသို့ အရညျတှေ တှနျးပို့သလို ဖွဈစပေါတယျ။ခွထေောကျအတှငျးဘကျရှိ သှေးပွနျကွောတှငျ သှေးထဲပိတျဆို့ခွငျးကို Deep Vein Thrombosis (DVT) လို့ချေါပါတယျ။ ထို DVTဟာ သှေးခဲတှေ ပွုတျထှကျသှားပါက အဆုတျဆီသို့ ရောကျရှိပွီး အသကျအန်တရာယျကိုပါ ခွိမျးခွောကျနိုငျပါတယျ။
နှလုံးပွဿနာကွောငျ့ သှေးမြားကို ကောငျးစှာမညှဈနိုငျတဲ့အခါတှငျလညျး ခွထေောကျနှငျ့ ခွကေငျြးဝတျတှဆေီမှာ သှေးတှစေုပုံနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ခွထေောကျတှေ ဖောရောငျနတေဲ့အပွငျ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး၊ အသကျရှူမဝခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးနှာခခြွေငျး၊ ရငျတုနျခွငျးနှငျ့ မောပနျးခွငျးတို့ကိုပါ တှဲဖကျခံစားနရေပွီဆိုပါက ဆရာဝနျနှငျ့ အမွနျဆုံးပွသပါ။
သားအိမျထဲတှငျ သန်ဒသေားလေး ရှိနခွေငျးကွောငျ့ ဝမျးဗိုကျရှိ သှေးပွနျကွောတှကေို ဖိမိနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး သှေးတှဟော ခွထေောကျနှငျ့ ခွကေငျြးဝတျမြားတှငျ စုပုံနတေတျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ သှေးတိုးခွငျးကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆိပျတကျသူ အမြိုးသမီးတှမှောဆိုရငျ ခွထေောကျတှေ အလှနျအမငျး ဖောနတောကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
နာတာရှညျအသညျးရောဂါရှိသူတှမှောဆိုရငျ အသားဝါခွငျး၊ ဝမျးအရောငျဖြော့ခွငျး၊ လကျဖဝါးမြားရဲနခွေငျးနှငျ့ ခွထေောကျမြားဖောခွငျးကို ကွုံတှတေ့တျပါတယျ။ အလားတူပဲ ကြောကျကပျမကောငျးသူတှမှောဆိုလညျး ခွထေောကျတှေ ဖောရောငျနတေတျပါတယျ။
နစေ့ဉျအစားအစာတှငျ အငနျကွိုကျသူမြားအနနှေငျ့ ကိုယျခန်တာကနေ ရမြေားကို ပွနျလညျဆှဲထားသောကွောငျ့ ခွထေောကျမြားဖောခွငျးရှိသလို အထိုငျမြားသူမြား၊ အဝလှနျနသေူမြားတှငျလညျး သှေးလှညျ့ပတျမှု အားနညျးရာကနေ ခွထေောကျမြား ဖောရောငျနိုငျပါသေးတယျ။
Credit-လပွေနေုသှေး (ဆေး-၂) (www.drmyanmar.com
ခြေထောက်တွေ ဖောနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
ခြေထောက်လေးတွေ ခဏတာဖောနေခြင်းဟာ ငန်တဲ့အစားအစာတွေစားခြင်းနှင့် အကြာကြီး မတ်တတ်ရပ်ခြင်းတို့ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုအချက်တွေ မပြုလုပ်ထားဘဲ ဖောရောင်နေခြင်းကတော့ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၁)သွေးပြန်ကြော စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း
ခြေထောက်ရှိ သွေးပြန်ကြောတွေ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါက သွေးတွေ ကောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်တော့မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်တွေမှာ စုပုံနေတတ်တာမို့ ခြေထောက်တွေ ဖောရောင်နေစေပါတယ်။
သွေးပြန်ကြောများ ပိတ်ဆို့နေခြင်းဟာ သွေးတွေကို ပုံမှန်စီးဆင်းနေကျအတိုင်း ကောင်းစွာမစီးဆင်းစေပဲ စုပုံနေစေတဲ့အတွက်သွေးကြောအတွင်း ဖိအားတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သွေးကြောပတ်လည်ရှိ တစ်ရှူးတွေဆီသို့ အရည်တွေ တွန်းပို့သလို ဖြစ်စေပါတယ်။ခြေထောက်အတွင်းဘက်ရှိ သွေးပြန်ကြောတွင် သွေးထဲပိတ်ဆို့ခြင်းကို Deep Vein Thrombosis (DVT) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထို DVTဟာ သွေးခဲတွေ ပြုတ်ထွက်သွားပါက အဆုတ်ဆီသို့ ရောက်ရှိပြီး အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးပြဿနာကြောင့် သွေးများကို ကောင်းစွာမညှစ်နိုင်တဲ့အခါတွင်လည်း ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်တွေဆီမှာ သွေးတွေစုပုံနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ခြေထောက်တွေ ဖောရောင်နေတဲ့အပြင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ချောင်းဆိုးနှာချေခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်းနှင့် မောပန်းခြင်းတို့ကိုပါ တွဲဖက်ခံစားနေရပြီဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြသပါ။
သားအိမ်ထဲတွင် သန္ဒေသားလေး ရှိနေခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ရှိ သွေးပြန်ကြောတွေကို ဖိမိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သွေးတွေဟာ ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်များတွင် စုပုံနေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သွေးတိုးခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်သူ အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် ခြေထောက်တွေ အလွန်အမင်း ဖောနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
နာတာရှည်အသည်းရောဂါရှိသူတွေမှာဆိုရင် အသားဝါခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ လက်ဖဝါးများရဲနေခြင်းနှင့် ခြေထောက်များဖောခြင်းကို ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူတွေမှာဆိုလည်း ခြေထောက်တွေ ဖောရောင်နေတတ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အစားအစာတွင် အငန်ကြိုက်သူများအနေနှင့် ကိုယ်ခန္တာကနေ ရေများကို ပြန်လည်ဆွဲထားသောကြောင့် ခြေထောက်များဖောခြင်းရှိသလို အထိုင်များသူများ၊ အဝလွန်နေသူများတွင်လည်း သွေးလှည့်ပတ်မှု အားနည်းရာကနေ ခြေထောက်များ ဖောရောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
Credit-လေပြေနုသွေး (ဆေး-၂) (www.drmyanmar.com
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ခွထေောကျတှေ ဖောနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား
မှေးစကနေ ခွောကျလအတှငျး ခြောငျးခွောကျဆိုးနပွေီး နရေခကျနတေဲ့ သားသားမီးမီးအတှကျ အကောငျးဆုံး ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေးကတော့ မိခငျနို့ပါတဲ့။ မိခငျနို့လညျး တိုကျသလို ခဈြစရာ့အရှယျလေးတှရေဲ့ အသကျအပိုငျးအခွားအလိုကျ မိမိဘာသာ အလှယျတကူဖျောစပျလို့ရတဲ့ ခြောငျးဆိုးပြောကျ အစှမျးထကျ အိမျတှငျးဆေးဝါးလေးတှေ အကွောငျးလညျး သိရလအေောငျ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံလေး တငျပွပေးလိုကျပါတယျ မမေေ ဖဖေတေို့ရေ …။
-မိခငျနို့ပာာ မခြိုလှနျး မပေါ့လှနျး အနတေျောဖွဈတဲ့အပွငျ အာပာာရဓာတျပေါငျးစုံ ပွညျ့ဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခြောငျးဆိုးပြောကျစမေယျ့ ပဋိပစ်စညျးတှေ ကိုယျခံအားတကျစမေယျ့ဓာတျတှကေလညျး အလြှံပယျပါတဲ့။ ဒီတော့ ခြောငျးခွောကျဆိုးနလေို့ မိခငျနို့တိုကျကြှေးတာကို မရပျတနျ့လိုကျပါနဲ့။ နှာခေါငျးထဲကို အစကျခတြဲ့ ဆလိုငျးပုလငျးငယျလေးတှကေနေ အစကျခပြွီး နှာခေါငျးကို သနျ့စငျအောငျ၊ ပှငျ့အောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။ ရငျသှေးလေးအတှကျ သငျ့တျောပါ့မလားတော့ ဆရာဝနျနဲ့ အရငျတိုငျပငျပါနျော။
-ကွကျသှနျဖွူကို အခွောကျခံ ညကျနအေောငျ အမှုနျ့ကွိတျပွီး မုနျညငျးဆီ သနျ့သနျ့လေးနဲ့ ရောလိုကျပါ။ ဆီကို ရငျသှေးလေးရဲ့ ရငျဘတျနဲ့ခွဖေဝါးတှကေို လိမျးကြံပေးပါ။
-ပငျစမျးရှကျခွောကျလေးတှကေို အမှုနျ့ကွိတျပါ။ အုနျးဆီထဲကို ရောမှလေိုကျပါ။ ခြောငျးခွောကျဆိုးနတေဲ့ လသားအရှယျ သားသားမီးမီးရဲ့ ရငျဘတျ၊ ခွဖေဝါးနဲ့ လညျပငျးလေးတှကေို အသာအယာ ပှတျလိမျးပေးလို့ရပါတယျ။
ခွောကျလကနေ ဆယျလအတှငျး သားသားမီးမီးလေးတှအေတှကျကတော့ –
-ဆနှငျးမှုနျ့စဈစဈကို ရနှေေးလေး အနညျးငယျရောပွီး အနှဈပွုလုပျပါ။ သူလေးရဲ့ ခွဖေဝါးနဲ့ နဖူးတှကေို ပါးပါးလေး လိမျးကြံပေးပါ။
-မုနျလာဥနီဖြျောရညျက ထူးခွားတဲ့ကိုယျခံအားပွညျ့ဓာတျတှေ ပွညျ့ဝစှာ ပါဝငျတာကွောငျ့ လတျလတျဆတျဆတျ ဖြျောစပျပွီးတာနဲ့ နစေ့ဉျ အနညျးငယျစီတိုကျပေးရငျ ခြောငျးခွောကျကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
-မွနျမာတှအေိမျမှာ အမွဲရှိတတျတဲ့ မုနျညှငျးဆီကတော့ အရိုးရှငျးဆုံး အထိရောကျဆုံးပါတဲ့။ ခြောငျးခွောကျဆိုးပွီး မသကျမသာဖွဈနတေဲ့ ရငျသှေးလေးကို မုနျညှငျးဆီနှေးလေးနဲ့ နှိပျနယျပေးလိုကျပါဦး။
-ဆယျလကနေ တဈနှဈအောကျ အရှယျလေးတှအေတှကျ
-ကှမျးရှကျ၊ ကွကျသှနျနီခွောကျ ပငျစိမျးရှကျခွောကျလေးတှကေို ရောစပျပွီး မှုနျ့ညကျနအေောငျ ကွိတျလိုကျပါ။ အမှုနျ့ကို အုနျးဆီစဈစဈနဲ့ ရောနှောပွီး ရငျဘတျနဲ့ ခွဖေဝါးလေးတှကေို လိမျးကြံပေးပါ။
-ပရုတျဆီကလညျး ကောငျးမှနျတဲ့ဆေးတဈလကျပါတဲ့။ ပရုတျဆီလေးနညျးနညျးနဲ့ အုနျးဆီလေးကို ရောစပျပွီး သူလေးရဲ့ရငျဘတျလေးကို အသာအယာ သပျခပြေးလိုကျပါနျော။
-ရမြေားမြားတိုကျပါ။ ရမေပူမအေး နှေးနှေးလေး မကွာခဏ တိုကျကြှေးပါ။ ခြှဲကွရေငျခြောငျစပေါတယျနျော။
ခြောငျးခွောကျဆိုးပြောကျဖို့အတှကျ အခွခေံအကဆြုံး လိုကျနာသငျ့တဲ့အခကျြတှကေတော့ ဒီမှာပါ။
အမှေးအမြှငျတှေ ထှကျတဲ့ မှေးပှအင်ျကြီတှေ၊ တဘကျတှမေသုံးဘဲ ခညျြထညျကောငျးကောငျး ဝတျဆငျပေးပါ။ အနံ့ပွငျးတဲ့ ပေါငျဒါတှေ ရခြေိုးဆီတှေ မသုံးပါနဲ့။ အိပျရာကို သကျသောငျ့သကျသာဖွဈပါစေ။ ပါးပါးလြားလြား စောငျလေးတှေ သုံးပါ။ ကိုယျခံအားတကျအောငျ မြားမြားအိပျပါစေ။ မိခငျနို့ ဆကျတိုကျကြှေးပါ။ ခြောငျးခွောကျဆိုးတာ မသကျသာရငျ ရကျရှညျလာရငျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသဆှေးနှေးဖို့ စီစဉျရပါမယျ မမေတေို့ရေ။
မွေးစကနေ ခြောက်လအတွင်း ချောင်းခြောက်ဆိုးနေပြီး နေရခက်နေတဲ့ သားသားမီးမီးအတွက် အကောင်းဆုံး ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကတော့ မိခင်နို့ပါတဲ့။ မိခင်နို့လည်း တိုက်သလို ချစ်စရာ့အရွယ်လေးတွေရဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် မိမိဘာသာ အလွယ်တကူဖော်စပ်လို့ရတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက် အစွမ်းထက် အိမ်တွင်းဆေးဝါးလေးတွေ အကြောင်းလည်း သိရလေအောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် မေမေ ဖေဖေတို့ရေ …။
-မိခင်နို့ပာာ မချိုလွန်း မပေါ့လွန်း အနေတော်ဖြစ်တဲ့အပြင် အာပာာရဓာတ်ပေါင်းစုံ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချောင်းဆိုးပျောက်စေမယ့် ပဋိပစ္စည်းတွေ ကိုယ်ခံအားတက်စေမယ့်ဓာတ်တွေကလည်း အလျှံပယ်ပါတဲ့။ ဒီတော့ ချောင်းခြောက်ဆိုးနေလို့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာကို မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။ နှာခေါင်းထဲကို အစက်ချတဲ့ ဆလိုင်းပုလင်းငယ်လေးတွေကနေ အစက်ချပြီး နှာခေါင်းကို သန့်စင်အောင်၊ ပွင့်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ရင်သွေးလေးအတွက် သင့်တော်ပါ့မလားတော့ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ပါနော်။
-ကြက်သွန်ဖြူကို အခြောက်ခံ ညက်နေအောင် အမှုန့်ကြိတ်ပြီး မုန်ညင်းဆီ သန့်သန့်လေးနဲ့ ရောလိုက်ပါ။ ဆီကို ရင်သွေးလေးရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ခြေဖဝါးတွေကို လိမ်းကျံပေးပါ။
-ပင်စမ်းရွက်ခြောက်လေးတွေကို အမှုန့်ကြိတ်ပါ။ အုန်းဆီထဲကို ရောမွှေလိုက်ပါ။ ချောင်းခြောက်ဆိုးနေတဲ့ လသားအရွယ် သားသားမီးမီးရဲ့ ရင်ဘတ်၊ ခြေဖဝါးနဲ့ လည်ပင်းလေးတွေကို အသာအယာ ပွတ်လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
ခြောက်လကနေ ဆယ်လအတွင်း သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက်ကတော့ –
-ဆနွင်းမှုန့်စစ်စစ်ကို ရေနွေးလေး အနည်းငယ်ရောပြီး အနှစ်ပြုလုပ်ပါ။ သူလေးရဲ့ ခြေဖဝါးနဲ့ နဖူးတွေကို ပါးပါးလေး လိမ်းကျံပေးပါ။
-မုန်လာဥနီဖျော်ရည်က ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ခံအားပြည့်ဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖျော်စပ်ပြီးတာနဲ့ နေ့စဉ် အနည်းငယ်စီတိုက်ပေးရင် ချောင်းခြောက်ကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
-မြန်မာတွေအိမ်မှာ အမြဲရှိတတ်တဲ့ မုန်ညှင်းဆီကတော့ အရိုးရှင်းဆုံး အထိရောက်ဆုံးပါတဲ့။ ချောင်းခြောက်ဆိုးပြီး မသက်မသာဖြစ်နေတဲ့ ရင်သွေးလေးကို မုန်ညှင်းဆီနွေးလေးနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ပါဦး။
-ဆယ်လကနေ တစ်နှစ်အောက် အရွယ်လေးတွေအတွက်
-ကွမ်းရွက်၊ ကြက်သွန်နီခြောက် ပင်စိမ်းရွက်ခြောက်လေးတွေကို ရောစပ်ပြီး မှုန့်ညက်နေအောင် ကြိတ်လိုက်ပါ။ အမှုန့်ကို အုန်းဆီစစ်စစ်နဲ့ ရောနှောပြီး ရင်ဘတ်နဲ့ ခြေဖဝါးလေးတွေကို လိမ်းကျံပေးပါ။
-ပရုတ်ဆီကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ဆေးတစ်လက်ပါတဲ့။ ပရုတ်ဆီလေးနည်းနည်းနဲ့ အုန်းဆီလေးကို ရောစပ်ပြီး သူလေးရဲ့ရင်ဘတ်လေးကို အသာအယာ သပ်ချပေးလိုက်ပါနော်။
-ရေများများတိုက်ပါ။ ရေမပူမအေး နွေးနွေးလေး မကြာခဏ တိုက်ကျွေးပါ။ ချွဲကြေရင်ချောင်စေပါတယ်နော်။
ချောင်းခြောက်ဆိုးပျောက်ဖို့အတွက် အခြေခံအကျဆုံး လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ ဒီမှာပါ။
အမွှေးအမျှင်တွေ ထွက်တဲ့ မွေးပွအင်္ကျီတွေ၊ တဘက်တွေမသုံးဘဲ ချည်ထည်ကောင်းကောင်း ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ အနံ့ပြင်းတဲ့ ပေါင်ဒါတွေ ရေချိုးဆီတွေ မသုံးပါနဲ့။ အိပ်ရာကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပါစေ။ ပါးပါးလျားလျား စောင်လေးတွေ သုံးပါ။ ကိုယ်ခံအားတက်အောင် များများအိပ်ပါစေ။ မိခင်နို့ ဆက်တိုက်ကျွေးပါ။ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ မသက်သာရင် ရက်ရှည်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်ရပါမယ် မေမေတို့ရေ။
Credit-ဂျီပီငှက် (ဆေး/မန်း) (www.drmyanmar.com)
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ကလေးငယျလေးမြား ခြောငျးခွောကျဆိုးခွငျးအတှကျ
မိုးကုတျဆရာတျော ဘုရားကွီး ခြီးမွှငျ့သော လဖွေတျလူမမာမြားအတှကျဆေးနညျး
Posted on January 24, 2021 January 24, 2021 by Tin Mg Shwe
လေဖြတ်လူနာအတွက် အုန်းသီးနှင့် ထနောင်းခေါက်
လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရ သူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက်
လေဖြတ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ခံစားရပါသည်။ ပြုစုရသော မိသားစုများမှာလဲ အင်မတန်မှ ဒုက္ခရောက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးဖော်နည်းလေးမျှဝေ လိုက်ပါသည်။
၂။ ထနှောင်းခေါက်နှင့် ချက်သော တောအရက်ဦးရည်
ဆေးဖော်နည်းမှာ အုန်းသီး၏ နတ်သမီးပေါက် အနားကို ဓားနှင့် ရှပ်၍ နတ်သမီးပေါက်ကို ဖောက်ပြီး အုန်းရည်များ ထုတ်ပြစ်ရပါမည်။ ၎င်းနောက် အရက်ဦးရည်ကို အုန်းသီးထဲတွင် အပြည့်ထည့်၍ အပေါက်ကို သင့်တော်ရာဖြင့် လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ။ ပိတ်ပြီးသောအုန်းသီးကို မြေကြီးကို တောင်ဝက်လောက်တူး၍ (၇)ရက် တိတိ မြုပ်ပါ။ (၇)ရက်ပြည့်လျှင် ပြန်ဖော်၍ အုန်းသီးထဲမှ အရက်များပြန်ထုတ်ပြီး ပုလင်းထဲပြန်ထည့်၍ သောက်လို့ရပါပြီ။
တစ်ခါသောက် လဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်။ ဆေးသောက်ပြီးလျှင် လူနာ၏ ကိုယ်တွင်းမှာ စိုးစိုးစစ်စစ် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဆိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ ထွက်လာသော ချွေးများကို သုတ်ပြစ်၍ အဝတ်အသစ် လဲပါ။ လေဖြတ်ထားသော နေရာများကိုလဲ လိမ်းပေး၍ ရပါသည်။
၎င်းဆေးနည်းသည် မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်သော ဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။အသေးစိတ်သိလိုပါက အောက်ပါ ph ကိုဆက်သွယ်၍မေးနိုင်ပါသည်။
Credit-အောင်မြင့် အကွက်(၄၀၆) တမာကုန်းရပ်
သံလျှက်မှော် အနောက် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မန္တလေးမြို့ Ph=0943060910
လဖွေတျလူနာအတှကျ အုနျးသီးနှငျ့ ထနောငျးခေါကျ
လဖွေတျဝဒေနာ ခံစားနရေ သူမြားအတှကျ ဆေးနညျးကောငျးတဈလကျ
လဖွေတျ ဝဒေနာ ခံစားနရေသူမြားသညျ ပငျပနျးဆငျးရဲစှာ ခံစားရပါသညျ။ ပွုစုရသော မိသားစုမြားမှာလဲ အငျမတနျမှ ဒုက်ခရောကျပါသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ ဆေးဖျောနညျးလေးမြှဝေ လိုကျပါသညျ။
၂။ ထနှောငျးခေါကျနှငျ့ ခကျြသော တောအရကျဦးရညျ
ဆေးဖျောနညျးမှာ အုနျးသီး၏ နတျသမီးပေါကျ အနားကို ဓားနှငျ့ ရှပျ၍ နတျသမီးပေါကျကို ဖောကျပွီး အုနျးရညျမြား ထုတျပွဈရပါမညျ။ ၎င်းငျးနောကျ အရကျဦးရညျကို အုနျးသီးထဲတှငျ အပွညျ့ထညျ့၍ အပေါကျကို သငျ့တျောရာဖွငျ့ လုံအောငျပွနျပိတျပါ။ ပိတျပွီးသောအုနျးသီးကို မွကွေီးကို တောငျဝကျလောကျတူး၍ (၇)ရကျ တိတိ မွုပျပါ။ (၇)ရကျပွညျ့လြှငျ ပွနျဖျော၍ အုနျးသီးထဲမှ အရကျမြားပွနျထုတျပွီး ပုလငျးထဲပွနျထညျ့၍ သောကျလို့ရပါပွီ။
တဈခါသောကျ လဖကျရညျ အကွမျးပနျးကနျ တဈလုံး တဈနတေ့ဈကွိမျ။ ဆေးသောကျပွီးလြှငျ လူနာ၏ ကိုယျတှငျးမှာ စိုးစိုးစဈစဈ ဖွဈတတျပါသညျ။ ဆိုးရိမျစရာမရှိပါ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပါ။ ထှကျလာသော ခြှေးမြားကို သုတျပွဈ၍ အဝတျအသဈ လဲပါ။ လဖွေတျထားသော နရောမြားကိုလဲ လိမျးပေး၍ ရပါသညျ။
၎င်းငျးဆေးနညျးသညျ မိုးကုတျဆရာတျော ဘုရားကွီး ခြီးမွှငျ့သော ဆေးနညျးဖွဈပါသညျ။အသေးစိတျသိလိုပါက အောကျပါ ph ကိုဆကျသှယျ၍မေးနိုငျပါသညျ။
Credit-အောငျမွငျ့ အကှကျ(၄၀၆) တမာကုနျးရပျ
သံလြှကျမှျော အနောကျ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ မန်တလေးမွို့ Ph=0943060910
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on မိုးကုတျဆရာတျော ဘုရားကွီး ခြီးမွှငျ့သော လဖွေတျလူမမာမြားအတှကျဆေးနညျး
ခံတှငျးပကျြသူမြား ခံတှငျးလိုကျစပွေီး သှားကဉျြ၊ သှားကိုကျ၊ ပနျးနာ ဝဒေနာမြားအတှကျ အစှမျးထကျ ခရမျးကစော့ပငျ
အပငျအမွငျ့မှာ တဈတောငျမှ သုံးတောငျခနျ့ မွငျ့၏။ ခရမျးသီးပငျ နှငျ့တူ၏။ အကိုငျး အခကျမြားတှငျ မာသော ဆူးမြားရှိ၏။ အရှကျမှာ တဈလကျမမှ ခွောကျလကျမအထိ ရှညျ၍ တဈလကျမမှ လေးလကျမ အထိကယျြ၏။ အသီးတှငျ အဖွူစကျကလေးမြားရှိ၍ အသီးမှာ ဆီးဖွူသီး အငယျစား ခနျ့ရှိ၏။ အရသာမှာ စပျ၊ ခါး၊ ပူဖွဈ၏။
ပိုးရောဂါ၊ သလိပျနှငျ့ လဒေေါသကို နိုငျ၏။ ယားနာ၊ နူနာတို့ကို ပြောကျကငျးစတေတျ၏။ အပငျမှာ နှလုံးကို ကြေးဇူးပွု၏။ အမြားအားဖွငျ့ အသီးလုံးမြားကို ထမငျးဝိုငျးတှငျ အတို့အမွှုပျ အဖွဈ စားသုံးကွသလို ခကျြ၍လညျးစားကွ၏။ သလိပျရောဂါ၊ လရေောဂါ၊ ပြို့အနျခွငျး၊ ယားနာ၊ ပနျးနာ၊ ထိုးအောငျ့သော ရောဂါတို့ကို ပြောကျကငျး စတေတျသညျ။ ခံတှငျးပကျြသူမြား ခံတှငျးလိုကျစေ၍ အစာလညျး ဆေး၊ ဆေးလညျးအစာ ဟူသော စကားပုံအတိုငျး ခရမျးကစော့သီးကို စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ဖျောပွပါ ဝဒေနာမြား ပြောကျကငျးစသေညျ။
ခံတွင်းပျက်သူများ ခံတွင်းလိုက်စေပြီး သွားကျဉ်၊ သွားကိုက်၊ ပန်းနာ ဝေဒနာများအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းကစော့ပင်
အပင်အမြင့်မှာ တစ်တောင်မှ သုံးတောင်ခန့် မြင့်၏။ ခရမ်းသီးပင် နှင့်တူ၏။ အကိုင်း အခက်များတွင် မာသော ဆူးများရှိ၏။ အရွက်မှာ တစ်လက်မမှ ခြောက်လက်မအထိ ရှည်၍ တစ်လက်မမှ လေးလက်မ အထိကျယ်၏။ အသီးတွင် အဖြူစက်ကလေးများရှိ၍ အသီးမှာ ဆီးဖြူသီး အငယ်စား ခန့်ရှိ၏။ အရသာမှာ စပ်၊ ခါး၊ ပူဖြစ်၏။
ပိုးရောဂါ၊ သလိပ်နှင့် လေဒေါသကို နိုင်၏။ ယားနာ၊ နူနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အပင်မှာ နှလုံးကို ကျေးဇူးပြု၏။ အများအားဖြင့် အသီးလုံးများကို ထမင်းဝိုင်းတွင် အတို့အမြှုပ် အဖြစ် စားသုံးကြသလို ချက်၍လည်းစားကြ၏။ သလိပ်ရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ယားနာ၊ ပန်းနာ၊ ထိုးအောင့်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း စေတတ်သည်။ ခံတွင်းပျက်သူများ ခံတွင်းလိုက်စေ၍ အစာလည်း ဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဟူသော စကားပုံအတိုင်း ခရမ်းကစော့သီးကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ဖော်ပြပါ ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းစေသည်။
သွားနာ၊ သွားကိုက်၊ သွားကျဉ်ခြင်း များအတွက် ခရမ်းကစော့ အမြစ်ကို သွေး၍ သိပ်ပေးခြင်း၊ ၎င်းအမြစ်မှုန့်ကို မှိုင်းတိုက်၍ အခိုးကို ရှူပေးပါက သွားနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်း စေသည်။ ။
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ခံတှငျးပကျြသူမြား ခံတှငျးလိုကျစပွေီး သှားကဉျြ၊ သှားကိုကျ၊ ပနျးနာ ဝဒေနာမြားအတှကျ အစှမျးထကျ ခရမျးကစော့ပငျ
မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အများဆုံးပေါက်ရောက်သည် – သဘာဝအလျှောက်ပေါက်ရောက်သည်။
အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်/ အမြင့် ၁၂ ပေခန့်အထိ မြင့်သည်။ အကိုင်းဖြာသည်။ ပင်စည် ခပ်မွဲမွဲ ညိုခြောက်ခြောက် အရောင်ရှိသည်။
၁။ မူးယစ်တတ်သော အစားအစာကို စားသောက်မိပါက ချက်ခြင်း မရှော့ဆေးရွက်ကို စားပါ။မည်သည့် အစားအစာကိုမဆို အစားမှားမိပါက မရှော့ဆေးရွက်ကို စားသုံးနိုင်သည်။ လူသာမက တိရစ္ဆာန်များ အစားမှားလျှင်လည်း ၎င်းဆေးရွက်ဖြင့် ပျောက်ကင်းသည်။
၂။ မူးယစ်စေတတ်သည့် အဆိပ်ဟူသမျှကို ပြေစေပါသည်။ မရှော့ဆေးရွက်ကို စားသုံးပြီး အခြား ဘယဆေးများကို မှီဝဲ သုံးစွဲပါက မည်သည့်ဆေးမှ တန်ခိုး အာနိသင် မရှိတော့ပါ။ အခြား ဘယဆေးများ၏ တန်ခိုးအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။
၃။ ပျား၊ ကင်းမြီးကောက် အခြားအဆိပ်ရှိသည့် အကောင်များ ကိုက်မိ ကုတ်မိပါက ချက်ခြင်း ၎င်းဆေးရွက်ကို စားသုံးပါ။ ချက်ခြင်း စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးသို့ အဆိပ်မရောက်နိုင်ရန် ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အရွက်ကို ဝါးပြီး ဆေးဖတ်နဲ့ အနာပတ်လည် အုပ်ထားပါ။ အနာဝကို မဖုံးမိပါစေနှင့်။
၄။ အရိုးအဆစ်ကျိုးပဲ့၍ သွေးမထွက်သော ဒါဏ်ရာရရှိသူအား ၎င်းဆေးရွက်ကို စားစေပါ။အရိုးကို ပြန်ဆက်စေသည်။ မလိမ်းပါနှင့် သွေးမထွက်ပဲ လိမ်းမိပါက သွေးပုပ်ငုတ်၍ အနာရင်းတတ်သည်။ အနာရင်းပြီး အောင့်တတ်ပါသည်။
၅။ သွေးထွက်သည့် ဒါဏ်ရာဖြစ်ပါက အရွက်ဆေးကို စားရသည်။ အနာပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း ဆေးရွက်ဝါးပြီး အဖတ်နဲ့ အုံထားပါ။(အနာဝ ချန်အုပ်ထားပါ)
၆။ အဆိပ်သင့်သောသူအား ဆေးစားပြီး ၅ မိနစ်အတွင်း မသေပါက စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ၊ အဆိပ်ပြေမည်။
သေမည့်လူနာသည် ဆေးတိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သေတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အဆိပ်သည် နှလုံးတွင်းသို့ ရောက်ရှိခြင်းကြောင့် သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။ မူးယစ်စေတတ်သော အစားအစာနှင့် အဆိပ်ဆိုရာတွင် အသီးအနှံများကို စိုက်ပျိုးသည့် ဓာတ်မြေဩဇာ. ဆေးဝါး ခြင်ဆေး ကြွက်သတ်ဆေး အဆိပ်များကိုလည်းပြေစေသည်။ မလိုအပ်ပဲ စားပါက ကိုယ်ခန္ဓာ လေးလံထိုင်းမိူင်းတတ်သည်။
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on အဆိပျပွစေသေညျ့ မရှော့ပငျအစှမျးအံ့မခနျး။
ကွှကျတကျလို့ ကွှကျသားနာခွငျး၊ ကိုယျတှငျးကအရိုးနာ၊ အရှတျနာခွငျးတို့အတှကျ အိမျတှငျးဆေးနညျး
ကိုယျတှငျးကအရိုးနာ၊ အရှတျနာ၊ ကွှကျသားနာ တာတှကေို ဆားမီးလှျောအပူလေးနဲ့ ကွပျပူထိုးရငျပြောကျပါတယျ။ ဆားလကျတဆုပျကို အိုးထဲထညျ့လှျောပါ။ အငှထှေ့ကျပွီး ပူလာရငျ အဝတျလေးထဲ ထညျ့ထုပျပါ။ ပွီးရငျနာတဲ့နရောကို ဖိဖိတို့ပေးပါ။ သကျသာရာကနေ ပြောကျကငျးမှာပါ။ ၃-၄ ရကျတော့ ဇှဲထားလုပျပေးပါ။ Credit-Grace Tun Shein
ကိုယျတှငျးကအရိုးနာ၊ အရှတျနာ၊ ကွှကျသားနာ တာတှကေို ဆားမီးလှျောအပူလေးနဲ့ ကွပျပူထိုးရငျပြောကျပါတယျ။ ဆားလကျတဆုပျကို အိုးထဲထညျ့လှျောပါ။ အငှထှေ့ကျပွီး ပူလာရငျ အဝတျလေးထဲ ထညျ့ထုပျပါ။ ပွီးရငျနာတဲ့နရောကို ဖိဖိတို့ပေးပါ။ သကျသာရာကနေ ပြောကျကငျးမှာပါ။ ၃-၄ ရကျတော့ ဇှဲထားလုပျပေးပါ။
Credit-Grace Tun Shein
ကြွက်တက်လို့ ကြွက်သားနာခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာခြင်းတို့အတွက် အိမ်တွင်းဆေးနည်း
ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာ၊ ကြွက်သားနာ တာတွေကို ဆားမီးလှော်အပူလေးနဲ့ ကြပ်ပူထိုးရင်ပျောက်ပါတယ်။ ဆားလက်တဆုပ်ကို အိုးထဲထည့်လှော်ပါ။ အငွေ့ထွက်ပြီး ပူလာရင် အဝတ်လေးထဲ ထည့်ထုပ်ပါ။ ပြီးရင်နာတဲ့နေရာကို ဖိဖိတို့ပေးပါ။ သက်သာရာကနေ ပျောက်ကင်းမှာပါ။ ၃-၄ ရက်တော့ ဇွဲထားလုပ်ပေးပါ။ Credit-Grace Tun Shein
ကိုယ်တွင်းကအရိုးနာ၊ အရွတ်နာ၊ ကြွက်သားနာ တာတွေကို ဆားမီးလှော်အပူလေးနဲ့ ကြပ်ပူထိုးရင်ပျောက်ပါတယ်။ ဆားလက်တဆုပ်ကို အိုးထဲထည့်လှော်ပါ။ အငွေ့ထွက်ပြီး ပူလာရင် အဝတ်လေးထဲ ထည့်ထုပ်ပါ။ ပြီးရင်နာတဲ့နေရာကို ဖိဖိတို့ပေးပါ။ သက်သာရာကနေ ပျောက်ကင်းမှာပါ။ ၃-၄ ရက်တော့ ဇွဲထားလုပ်ပေးပါ။
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ကွှကျတကျလို့ ကွှကျသားနာခွငျး၊ ကိုယျတှငျးကအရိုးနာ၊ အရှတျနာခွငျးတို့အတှကျ အိမျတှငျးဆေးနညျး
ကငျမလငျးရှကျသညျ သညျးခွမှေကြောကျကို သနျ့စငျပေးနိုငျစှမျးရှိသညျ့ ဆေးဖကျဝငျ အပငျတဈမြိုးဖွဈသညျ။ ကြောကျကပျကြောကျတညျးခွငျး နှငျ့ ဆီးအိမျကြောကျတညျခွငျးတို့အတှကျ သံမနိုငျကြောကျမနိုငျအရှကျကို စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ကြောကျမြားကို ခပြေဈနိုငျသလို ကငျမလငျးရှကျကို စားသုံးခွငျးဖွငျ့လညျး သညျးခွမှေကြောကျကို ဖယျရှားပေးနိုငျပါသညျ။
ကငျမလငျးရှကျသညျ သပွရှေကျနှငျ့တူ၍ အရောငျမှာ စိမျးဝါရောနသေညျ။ အစိမျးရောငျ ခပျဖြော့ဖြော့နှငျ့ အဝါရောငျသနျးနသေညျ။ အရှကျ၏အသားသညျ နူးညံ့နေ၍ အရှကျရငျ့မြားသာလြှငျ အနညျးငယျ ကွမျးသညျ။ မငျးကငျး၊ ရဦေး၊ ဒီပဲယငျး၊ ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ မွနျမာပွညျအနှံ့အပွားတှငျ ပေါကျရောကျလရှေိ့ကွသညျ။
အသုံးပွုပုံ – ကငျမလငျးရှကျ ခပျသနျ့သနျ့ကို ခဉျြရညျခကျြသောကျခွငျး၊ ပွုတျ၍ သုပျစားခွငျး၊ ရနှေေးဖြော၍ တို့စားခွငျး၊ အသား၊ ငါးတို့နှငျ့အတူ ခကျြစားခွငျး၊ အရှကျနုမြားကို အခွောကျလှနျး၍ လကျဖကျခွောကျကဲ့သို့ ခတျ၍ သောကျသုံးခွငျးမြား ပွုလုပျနိုငျသညျ။ သညျးခွတှေငျ ကြောကျတညျနသေူမြား အပွငျ ရောဂါမရှိသူမြားလညျး ဟငျးအဖွဈ ခကျြပွုတျစားသုံးပေးပါက သညျးခွကြေောကျသညျခွငျးမှ ကငျးဝေးစသေညျ။ လူသား တိုငျး ရောဂါကငျးဝေး၍ သကျရှညျကနျြးမာကွပါစေ။
Credit – စောနှဲ့နဆေိုငျ (ပူတာအို)
ကင်မလင်းရွက်သည် သည်းခြေမှကျောက်ကို သန့်စင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် ဆေးဖက်ဝင် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်းခြင်း နှင့် ဆီးအိမ်ကျောက်တည်ခြင်းတို့အတွက် သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်အရွက်ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျောက်များကို ချေပစ်နိုင်သလို ကင်မလင်းရွက်ကို စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်း သည်းခြေမှကျောက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
ကင်မလင်းရွက်သည် သပြေရွက်နှင့်တူ၍ အရောင်မှာ စိမ်းဝါရောနေသည်။ အစိမ်းရောင် ခပ်ဖျော့ဖျော့နှင့် အဝါရောင်သန်းနေသည်။ အရွက်၏အသားသည် နူးညံ့နေ၍ အရွက်ရင့်များသာလျှင် အနည်းငယ် ကြမ်းသည်။ မင်းကင်း၊ ရေဦး၊ ဒီပဲယင်း၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိကြသည်။
အသုံးပြုပုံ – ကင်မလင်းရွက် ခပ်သန့်သန့်ကို ချဉ်ရည်ချက်သောက်ခြင်း၊ ပြုတ်၍ သုပ်စားခြင်း၊ ရေနွေးဖျော၍ တို့စားခြင်း၊ အသား၊ ငါးတို့နှင့်အတူ ချက်စားခြင်း၊ အရွက်နုများကို အခြောက်လှန်း၍ လက်ဖက်ခြောက်ကဲ့သို့ ခတ်၍ သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သည်းခြေတွင် ကျောက်တည်နေသူများ အပြင် ရောဂါမရှိသူများလည်း ဟင်းအဖြစ် ချက်ပြုတ်စားသုံးပေးပါက သည်းခြေကျောက်သည်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသည်။ လူသား တိုင်း ရောဂါကင်းဝေး၍ သက်ရှည်ကျန်းမာကြပါစေ။
Credit – စောနွဲ့နေဆိုင် (ပူတာအို)
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on သညျးခွကြေောကျရှိနတေယျဆိုရငျ ကငျမလငျးရှကျကိုသာသုံးပါ
မှိုနတိုပငျ၏ အစှမျးထကျ ဆေးဘကျဝငျအသုံးမြား
Posted on January 23, 2021 January 23, 2021 by Tin Mg Shwe
မှိုနတိုပငျသညျ ရစေပျစပျရှိသောနရောမြားတှငျ ပေါကျရောကျပွီး အရှကျပုံစံ ထူးခွားသော အပငျလေးမြားအဖွဈ တှမွေ့ငျနိုငျပါ တယျ၊၊ သေးငယျသော အရှကျလေးမြားသညျ ရှကျလှာနှဈခု ကပျလကျြ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထှကျနတော တှရေ့တယျ၊၊ ပြော့ပွီးသေးငယျသော ရိုးတံလေးမြားပျေါတှငျ အမွဈမှားလေးမြား ရှိပါတယျ၊၊ ရတှေငျတှားကာပေါကျသော အပငျမြိုး ဖွဈပွီး ပုံစံထငျရှားပွီး လူတိုငျးသိနိူငျသော အပငျလေးမြား ဖွဈပါတယျ။ မှိုနားတိုပငျကို အခြိုမြိုး နှငျ့ အခဉျြမြိုး ဆိုပွီး ၂ မြိုးခှဲခွားထားပမေယျ့ အပငျပုံစံမှာ အတူတူပငျ ဖွဈကွောငျး တှရေ့ပါတယျ
မှိုနားတို အခြိုပငျအား ဆေးဝါး အဖွဈအသုံးပွုပုံမြားမှာ-
(၁) ခြာခြာလညျအောငျ မူးဝခွေငျး
မှိုနားတို အခြိုပငျ အရှကျကို ပွုတျကာ အကွမျးပနျးကနျတလုံးစာတှငျ သကွားကိုလကျဖကျရညျဇှနျး တဇှနျးထညျ့ပွီးသောကျပါက လကေို အကွောငျးပွု၍ မူးဝခွေငျး ရောဂါကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ၊၊
(၂) သှေးပုပျကနျြ ရောဂါ
မှိုနာတို အပငျကလေးမြား ၁၀ ကပျြသားခနျ့ကို ရှောကျရညျ အကွမျးပနျးကနျ တလုံးစာခနျ့နှငျ့ စိမျထားပါ။ (၁)ရကျ (၂)ရကျ ထားပွီးမှ ဆယျယူကာ ကွကျသှနျဖွူ၊ နှမျးဆီခကျြနှငျ့ လကျသုပျသုပျ စားပါက အမြိုးသမီး မြား ဓမ်မတာ သှေးပုပျကနျြ ရောဂါကို သကျသာပြောကျကငျးစကွေောငျး တှရေ့ပါတယျ၊၊
(၃) ကလေးမြား လဆေနျနာ
မှိုနားတို အခြိုပငျအရှကျကို ပွုတျပွီး လကျဖကျရညျဇှနျး (၁) ဇှနျးစာတှငျ ဆား ၂ပှငျ့ခနျ့ခပျပွီး တိုကျကြှေးနိုငျပါတယျ ။
(၄) ကလေးမြား ရငျပွညျ့ရငျကယျခွငျး
မှိုနားတိုပငျ အခြိုရှကျကို ကှမျးရှကျ၊ နနှငျးမှုနျ့တို့ဆတူရောကွိုတျကာ မိခငျနို့ရညျနှငျ့ ဆတူ ရော ပွီး လကျဖကျရညျဇှနျူး နှငျ့ (၁) ဇှနျး တိုကျပေးနိုငျပါတယျ။
မှိုနားတို အခဉျြပငျရဲ့ အာနိသငျနဲ့ အသုံးပွုပုံ
အခြိုပငျကဲ့သို့ ပုံစံတူပွီး အရသာမှာ ခဉျြသေ အရသာရှိသညျ။ ဆေးဝါးအဖွဈ အသုံးမြားကွပွီး အဟာရအဖွဈ စားသုံးမှု နညျးပါးကွပါတယျ၊၊ အခဉျြပငျသညျ တိုငျးရငျဆေးပညာ သဘောအရ ခဉျြသောအရသာရှိ ကာ အေးသညျ၊ အပူကို ငွိမျးစသေညျ။ ဝမျးမီးတောကျစသေညျ၊ နှုတျ ခံတှငျး ကိုမွိနျစသေညျ။ နှလုံးကို အားပေးသညျ။ သှေးကို ခြုပျစသေညျ။ အရှတျကို ညဈသော အရညျ(သတ်တူရညျ)သညျ အကွောမြားကို တှနျ့ရှုံ့စသေညျ၊။ ခဉျြပွီး အေးသော သတ်တိရှိကာ စအိုကခြွငျး၊ ပဒိုငျးသီးစားမိကာ မူးဝခွေငျး၊ ရောငျရမျးခွငျး၊ အစာမကွခွေငျး၊ သှားဖုံးရောငျခွငျး၊ ရငျပတျနာခွငျးတို့ကို ပြောကျကငျးစသေညျ။ အထူးသဖွငျ့ မကျြစိရောဂါကို ပိုမို အကြိုးပွုကွောငျး တှရေ့ပါတယျ ။
ရောဂါဝဒေနာ အလိုကျမှိုနားတို ခဉျြကို အသုံးပွုပုံမြား-
(၁) စအိုကြ- စအိုလြှော၊ စအိုထှကျ ခွငျး
မှိုနားတို အခဉျြရှကျကို ထောငျးပွီး ညဈသော အရညျကို ထောပတျနှငျ့ ခကျြပါ။ စအိုတှငျးမှ ထှကျကနြသေော အူကို လိမျးပေးပါက သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ၊၊
(၂) ပဒိုငျးသီးစားမိပွီး မူးဝနေသေော လူနာကို ပဒိုငျး အဆိပျပွစေရေနျ ပေးခွငျး
မှိုနားတို အခဉျြရှကျကို ထောငျးပွီး ညဈသောအရညျကို တိုကျပေးပါက ပဒိုငျး အဆိပျပွစေပွေီး မူးဝနေမှေု သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ထိခိုကျဒဏျရာရကာ ရောငျရမျးခွငျး၊ အနာမြား ငနျးမနျးလိုကျကာ ရောငျရမျးခွငျးကို မှိုနားတို အခဉျြရှကျကို ကွိတျပွီး ရောငျသောနရောကို အုံပေးလငျြ အရောငျကပြွီး သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ၊၊
(၄) အစာမကွရေောဂါနှငျ့ ဝမျးကိုကျရောဂါ
မှိုနားတို အခဉျြသညျ ဝမျးမီးကို တောကျစသေောကွောငျ့ ဝမျးမီးနုံပွီး ဖွဈတတျသော အစာမကွခွေငျးနဲ့ ဝမျးကိုကျ ဝမျးပကျြခွငျး ရောဂါတှငျ အရှကျကို ကွကျသှနျဖွူ၊ နှမျးဆီနှငျ့ သုပျစားပါက သကျသာပြောကျကငျးစသေညျ၊၊
(၅) မကျြစေ့ နာရောဂါ
မကျြစနေ့ာပါက မှိုနားတိုအခဉျြအရှကျကို ကွိတျပွီး ညဈရသော အရညျ(သတ်တုရညျ) ကို မကျြစဉျးခပျပေးနိုငျကွောငျး တှရေ့တယျ၊၊ မကျြကှငျးဆေး အနနေဲ့ဖျောစပျအသုံးပွုလိုသူတို့အတှကျ ဆေးနညျး လကျဆောငျပေးလိုကျပါတယျ၊၊ (၁) ငါးကွငျးသညျးခွေ ။ (၂) ငရံ့သညျးခွေ (၃) မှိုနာတိုခဉျြ (၄)နနှငျးစိမျး အားလုံး ကို အလေးခြိနျ ဆတူ ရောစပျပွီး ကြောကျခဉျြသှေးရညျနဲ့ကွိတျကာ အတောငျ့ပွုလုပျ ထားပါ။ ဆေးတောငျ့ကို သှေးကာ မကျြစေ့ ဘေးပတျလညျကို ကှငျးပေးနိုငျပါတယျ၊။ မကျြစနေ့ာ မကျြစရေ့ောငျခွငျး ကိုကျခွငျး အောငျ့ခွငျးကို သကျသာပြောကျကငျးစသေော ဆေးနညျး တခုပါ၊၊ ထိုဆေးတောငျ့ကိုပငျ အမှုနျ့ပွုကာ မီးခဲတှငျဖွူးပွီး အငှကေို့ ရှုပေးပါက မကျြစေ့၊ မကျြရိုး၊ နားထငျ၊ ခေါငျးမြား ကိုကျခွငျးကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
(၆) သှားဖုံးရောငျ ရောဂါ
မှိုနားတို အခဉျြအရှကျကို ထောငျးပွီး အရညျညဈကာ ငုံဆေးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အခြိုနှငျ့အခဉျြ အရှကျမြားကို နရေိပျတှငျ လှမျးကာ အမှုနျ့ ပွုပွီး ရောစပျကာ သှားဖုံးရောငျသောနရောကို သိပျပေးပါကလဲ သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ၊၊
(၇) မနျးဆေးမြားတှငျ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုခွငျး
မှိုနားတိုခဉျြသညျ အနာငနျးမနျးကို နိုငျသဖွငျ့ မနျးဆေးမြားတှငျ ထညျ့သှငျး ဖျောစပျကွပါတယျ၊၊
(၈) အဆုတျလပွှေနျရောငျပွီး ခြောငျးဆိုးခွငျး
အဆုတျလပွှေနျရောငျပွီး ခြောငျးဆိုးခွငျး ရောဂါတှငျလညျး အသုံးပွုကွပါတယျ၊၊
(၉) ဆီးခြို သှေးခြို ရောဂါတှငျ အသုံးပွုခွငျး
ဆီးခြိုသှေးခြို ရောဂါသညျ တိုငျးရငျးဆေးပညာသဘောအရ ဝမျးမီးပကျြခွငျးမှ စတငျကွောငျးတှရေ့ပါတယျ၊၊ မှိုနတိုခဉျြရဲ့ ဝမျးမီးတောကျ အစာကွခွေငျး သတ်တိကွောငျ့ ဆီးခြိုသှေးခြို ဝဒေနာရှငျမြားကို ဓါတျစာအဖွဈ ပေးနိုငျပါတယျ။
အပငျရဲ့ပုံစံ ထူးခွားသလို အစာအဟာရ အနနေဲ့သာမက ဆေးဝါးအဖွဈပါ သုံးစှဲနိုငျသော မှိုနားတိုပငျရဲ့ အကွောငျးကို လကျလှမျးမှီသမြှ စုဆောငျး ရေးသားပါတယျ။ နောကျထပျမံ သိရှိပါကလဲ ဖွညျ့စှတျ တငျပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ၊၊
မှိုနတိုပင် သည် ရေစပ်စပ်ရှိသောနေရာများတွင် ပေါက်ရောက်ပြီး အရွက်ပုံစံ ထူးခြားသော အပင်လေးများအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါ တယ်၊၊ သေးငယ်သော အရွက်လေးများသည် ရွက်လွာနှစ်ခု ကပ်လျက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထွက်နေတာ တွေ့ရတယ်၊၊ ပျော့ပြီးသေးငယ်သော ရိုးတံလေးများပေါ်တွင် အမြစ်မွားလေးများ ရှိပါတယ်၊၊ ရေတွင်တွားကာပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်ပြီး ပုံစံထင်ရှားပြီး လူတိုင်းသိနိူင်သော အပင်လေးများ ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုနားတိုပင်ကို အချိုမျိုး နှင့် အချဉ်မျိုး ဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲခြားထားပေမယ့် အပင်ပုံစံမှာ အတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်
မှိုနားတို အချိုပင်အား ဆေးဝါး အဖြစ်အသုံးပြုပုံများမှာ-
(၁) ချာချာလည်အောင် မူးဝေခြင်း
မှိုနားတို အချိုပင် အရွက်ကို ပြုတ်ကာ အကြမ်းပန်းကန်တလုံးစာတွင် သကြားကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းထည့်ပြီးသောက်ပါက လေကို အကြောင်းပြု၍ မူးဝေခြင်း ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်၊၊
(၂) သွေးပုပ်ကျန် ရောဂါ
မှိုနာတို အပင်ကလေးများ ၁၀ ကျပ်သားခန့်ကို ရှောက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံးစာခန့်နှင့် စိမ်ထားပါ။ (၁)ရက် (၂)ရက် ထားပြီးမှ ဆယ်ယူကာ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှမ်းဆီချက်နှင့် လက်သုပ်သုပ် စားပါက အမျိုးသမီး များ ဓမ္မတာ သွေးပုပ်ကျန် ရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်၊၊
(၃) ကလေးများ လေဆန်နာ
မှိုနားတို အချိုပင်အရွက်ကို ပြုတ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်းစာတွင် ဆား ၂ပွင့်ခန့်ခပ်ပြီး တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ် ။
(၄) ကလေးများ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်း
မှိုနားတိုပင် အချိုရွက်ကို ကွမ်းရွက်၊ နနွင်းမှုန့်တို့ဆတူရောကြိုတ်ကာ မိခင်နို့ရည်နှင့် ဆတူ ရော ပြီး လက်ဖက်ရည်ဇွန်ူး နှင့် (၁) ဇွန်း တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မှိုနားတို အချဉ်ပင်ရဲ့ အာနိသင်နဲ့ အသုံးပြုပုံ
အချိုပင်ကဲ့သို့ ပုံစံတူပြီး အရသာမှာ ချဉ်သေ အရသာရှိသည်။ ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးများကြပြီး အဟာရအဖြစ် စားသုံးမှု နည်းပါးကြပါတယ်၊၊ အချဉ်ပင်သည် တိုင်းရင်ဆေးပညာ သဘောအရ ချဉ်သောအရသာရှိ ကာ အေးသည်၊ အပူကို ငြိမ်းစေသည်။ ဝမ်းမီးတောက်စေသည်၊ နှုတ် ခံတွင်း ကိုမြိန်စေသည်။ နှလုံးကို အားပေးသည်။ သွေးကို ချုပ်စေသည်။ အရွတ်ကို ညစ်သော အရည်(သတ္တူရည်)သည် အကြောများကို တွန့်ရှုံ့စေသည်၊။ ချဉ်ပြီး အေးသော သတ္တိရှိကာ စအိုကျခြင်း၊ ပဒိုင်းသီးစားမိကာ မူးဝေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ ရင်ပတ်နာခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အထူးသဖြင့် မျက်စိရောဂါကို ပိုမို အကျိုးပြုကြောင်း တွေ့ရပါတယ် ။
ရောဂါဝေဒနာ အလိုက်မှိုနားတို ချဉ်ကို အသုံးပြုပုံများ-
(၁) စအိုကျ- စအိုလျှော၊ စအိုထွက် ခြင်း
မှိုနားတို အချဉ်ရွက်ကို ထောင်းပြီး ညစ်သော အရည်ကို ထောပတ်နှင့် ချက်ပါ။ စအိုတွင်းမှ ထွက်ကျနေသော အူကို လိမ်းပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်၊၊
(၂) ပဒိုင်းသီးစားမိပြီး မူးဝေနေသော လူနာကို ပဒိုင်း အဆိပ်ပြေစေရန် ပေးခြင်း
မှိုနားတို အချဉ်ရွက်ကို ထောင်းပြီး ညစ်သောအရည်ကို တိုက်ပေးပါက ပဒိုင်း အဆိပ်ပြေစေပြီး မူးဝေနေမှု သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာများ ငန်းမန်းလိုက်ကာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို မှိုနားတို အချဉ်ရွက်ကို ကြိတ်ပြီး ရောင်သောနေရာကို အုံပေးလျင် အရောင်ကျပြီး သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်၊၊
(၄) အစာမကြေရောဂါနှင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ
မှိုနားတို အချဉ်သည် ဝမ်းမီးကို တောက်စေသောကြောင့် ဝမ်းမီးနုံပြီး ဖြစ်တတ်သော အစာမကြေခြင်းနဲ့ ဝမ်းကိုက် ဝမ်းပျက်ခြင်း ရောဂါတွင် အရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှမ်းဆီနှင့် သုပ်စားပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်၊၊
(၅) မျက်စေ့ နာရောဂါ
မျက်စေ့နာပါက မှိုနားတိုအချဉ်အရွက်ကို ကြိတ်ပြီး ညစ်ရသော အရည်(သတ္တုရည်) ကို မျက်စဉ်းခပ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရတယ်၊၊ မျက်ကွင်းဆေး အနေနဲ့ဖော်စပ်အသုံးပြုလိုသူတို့အတွက် ဆေးနည်း လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊၊ (၁) ငါးကြင်းသည်းခြေ ။ (၂) ငရံ့သည်းခြေ (၃) မှိုနာတိုချဉ် (၄)နနွင်းစိမ်း အားလုံး ကို အလေးချိန် ဆတူ ရောစပ်ပြီး ကျောက်ချဉ်သွေးရည်နဲ့ကြိတ်ကာ အတောင့်ပြုလုပ် ထားပါ။ ဆေးတောင့်ကို သွေးကာ မျက်စေ့ ဘေးပတ်လည်ကို ကွင်းပေးနိုင်ပါတယ်၊။ မျက်စေ့နာ မျက်စေ့ရောင်ခြင်း ကိုက်ခြင်း အောင့်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်း တခုပါ၊၊ ထိုဆေးတောင့်ကိုပင် အမှုန့်ပြုကာ မီးခဲတွင်ဖြူးပြီး အငွေ့ကို ရှုပေးပါက မျက်စေ့၊ မျက်ရိုး၊ နားထင်၊ ခေါင်းများ ကိုက်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
(၆) သွားဖုံးရောင် ရောဂါ
မှိုနားတို အချဉ်အရွက်ကို ထောင်းပြီး အရည်ညစ်ကာ ငုံဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အချိုနှင့်အချဉ် အရွက်များကို နေရိပ်တွင် လှမ်းကာ အမှုန့် ပြုပြီး ရောစပ်ကာ သွားဖုံးရောင်သောနေရာကို သိပ်ပေးပါကလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်၊၊
(၇) မန်းဆေးများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း
မှိုနားတိုချဉ်သည် အနာငန်းမန်းကို နိုင်သဖြင့် မန်းဆေးများတွင် ထည့်သွင်း ဖော်စပ်ကြပါတယ်၊၊
(၈) အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း
အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း ရောဂါတွင်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်၊၊
(၉) ဆီးချို သွေးချို ရောဂါတွင် အသုံးပြုခြင်း
ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါသည် တိုင်းရင်းဆေးပညာသဘောအရ ဝမ်းမီးပျက်ခြင်းမှ စတင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်၊၊ မှိုနတိုချဉ်ရဲ့ ဝမ်းမီးတောက် အစာကြေခြင်း သတ္တိကြောင့် ဆီးချိုသွေးချို ဝေဒနာရှင်များကို ဓါတ်စာအဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အပင်ရဲ့ပုံစံ ထူးခြားသလို အစာအဟာရ အနေနဲ့သာမက ဆေးဝါးအဖြစ်ပါ သုံးစွဲနိုင်သော မှိုနားတိုပင်ရဲ့ အကြောင်းကို လက်လှမ်းမှီသမျှ စုဆောင်း ရေးသားပါတယ်။ နောက်ထပ်မံ သိရှိပါကလဲ ဖြည့်စွတ် တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on မှိုနတိုပငျ၏ အစှမျးထကျ ဆေးဘကျဝငျအသုံးမြား
ခန်ဓာကိုယျရှိ အဆဈမြားကိုကျခွငျး၊ တငျးခွငျး၊ ရောငျခွငျးကွောငျ့ မထိုငျနိုငျ မသှားနိုငျဖွဈလြှငျ
ဤရောဂါ ဖွဈပျေါသူတို့အနကျ အခြို့မှာ လကျခြောငျးအဆဈမြား ရောငျတငျး၍ ကောငျးစှာ မဆုပျကိုငျနိုငျခွငျး၊ လကျမောငျးရငျးဆဈနှငျ့ တံတောငျဆဈတို့ ရောငျတငျး၍ လကျကောငျးစှာ မမွှောကျနိုငျခွငျး၊ မကှေး မဆနျ့နိုငျခွငျး၊ ဒူးဆဈ၊ ခွခေငျြးဝတျတို့ ရောငျတငျး၍ ကောငျးစှာမသှားနိုငျခွငျး၊ မကှေးနိုငျ မဆနျ့ နိုငျသောကွောငျ့ မထိုငျနိုငျခွငျး၊ ခွခြေောငျးဆဈမြား ရောငျတငျး၍ ဖိနပျစီး၍ မကောငျးခွငျး၊ အနညျးငယျလှုပျရှားလြှငျ မောဟိုကျလှယျခွငျး၊ အခြို့မှာ ဝမျးနှငျ့ ဆီးတို့နညျးခွငျး၊ အိပျမပြျောခွငျး စသညျတို့ ဖွဈပျေါခံစားရတတျသညျ။
အခြို့မှာ လအေားယုတျလြော့၍ ခေါငျးတုနျခွငျး၊ ခွတေုနျခွငျး၊ လကျတုနျခွငျး ဖွဈတတျရာဤသို့ ခွေ လကျ စသညျတို့အတှကျ ဤဆေးသညျ သကျသာစပေါသညျ။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆစ်များကိုက်ခြင်း၊ တင်းခြင်း၊ ရောင်ခြင်းကြောင့် မထိုင်နိုင် မသွားနိုင်ဖြစ်လျှင်
ဤရောဂါ ဖြစ်ပေါ်သူတို့အနက် အချို့မှာ လက်ချောင်းအဆစ်များ ရောင်တင်း၍ ကောင်းစွာ မဆုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ လက်မောင်းရင်းဆစ်နှင့် တံတောင်ဆစ်တို့ ရောင်တင်း၍ လက်ကောင်းစွာ မမြှောက်နိုင်ခြင်း၊ မကွေး မဆန့်နိုင်ခြင်း၊ ဒူးဆစ်၊ ခြေချင်းဝတ်တို့ ရောင်တင်း၍ ကောင်းစွာမသွားနိုင်ခြင်း၊ မကွေးနိုင် မဆန့် နိုင်သောကြောင့် မထိုင်နိုင်ခြင်း၊ ခြေချောင်းဆစ်များ ရောင်တင်း၍ ဖိနပ်စီး၍ မကောင်းခြင်း၊ အနည်းငယ်လှုပ်ရှားလျှင် မောဟိုက်လွယ်ခြင်း၊ အချို့မှာ ဝမ်းနှင့် ဆီးတို့နည်းခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်သည်။
အချို့မှာ လေအားယုတ်လျော့၍ ခေါင်းတုန်ခြင်း၊ ခြေတုန်ခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း ဖြစ်တတ်ရာဤသို့ ခြေ လက် စသည်တို့အတွက် ဤဆေးသည် သက်သာစေပါသည်။
Posted in ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိ LeaveaComment on ခန်ဓာကိုယျရှိ အဆဈမြားကိုကျခွငျး၊ တငျးခွငျး၊ ရောငျခွငျးကွောငျ့ မထိုငျနိုငျ မသှားနိုငျဖွဈလြှငျ